Fred oo ka warbixiyay inuu taageera buuxa u ahaa caruurnimadiisa laba ka mid ah xidigihii hore kooxda Arsenal – Gool FM
Fred oo ka warbixiyay inuu taageera buuxa u ahaa caruurnimadiisa laba ka mid ah xidigihii hore kooxda Arsenal
Dajiye October 14, 2018
(Manchester) 14 Okt 2018. Ciyaaryahanka khadka dhexe kooxda Manchester United Fred ayaa ka hadlay sida uu u jeclaa kubada cagta dalka England tan iyo caruurnimadiisa, iyo sida uu daawan jiray laba ka mid ah ciyaartoydii hore kooxda Arsenal.
Laacibka reer Brazil iyo kooxda Manchester United Fred ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee Manchester United, ayaa sheegay inuu si weyn ula socon jiray horyaalka Premier League.
“Waxaan daawan jiray kulamo badan ee horyaalka Premier League ah, markasta wuxuu ahaa mid aad u adag”.
“Waxaan daawan jiray kooxaha Manchester United, Manchester City, Chelsea iyo Arsenal, marka uu halkaas ka ciyaari jiray Gilberto Silva”.
“Horyaalka Premier League waxaa ku sugnaa xidigo badan aan kaga dayan jiray kubada cagta, sida Gilberto Silva, Thierry Henry, sidoo kale xidigaha Ryan Giggs iyo Paul Scholes”.
Farid ayaa ugu soo wareegay garoonka Old Trafford heshiis 5 sano ah, kadib markii uu kaga soo dhaqaaqay kooxda Shakhtar, suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay kadib loolan adag ee saxiixiisa uu ku dhex maray kooxaha Manchester United iyo Manchester City.
Mauro Icardi oo ka caawinaya Inter Milan saxiixa Luka Modric
Ramos oo rajaynaya in xiddigaha xulka Ingiriiska ay ka jiifato habeen dambe